Trond Mohn: Wuxuu sanadkii hore bixiyay 187 milyan kr oo canshuur ah. - NorSom News
Trond Mohn: Wuxuu sanadkii hore bixiyay 187 milyan kr oo canshuur ah.
Waxaa shaley soo baxay liiska canshuuraha ay dadku bixiyaan ee dowlada oo sanad walba xiligan oo kale la ogaado.
Ganacsadaha caanka ah ee Trond Mohn, kana soo jeedo magaalada Bergen ayaa sanadkii tagay noqday qofka canshuurta ugu badan bixiyay Norway. Wuxuuna canshuur ahaan u bixiyay lacag dhan 187 milyan oo kr, isaga oo dhakhli ahaan ay usoo gashay lacag dhan 443 milyan kr.
Booska labaad ee dadka canshuurta ugu badan bixiyay sanadkii hore, waxaa kujiro ganacsadaha kale ee Kjell Inge Røkke.
Halkan kasii liiska 10-ka qof ee canshuurta ugu badan bixiyay sanadkii hore.
Previous articleSweden: Nin lagu eedeeyay inuu qoxootiga jaajuusi jiray.
Next articleWasiirka cadaalada: Sharciyada Qoxootiga ee Australia, wax badan ayaa laga baran karaa.